🥇 nyocha na njikwa nke ndị ọrụ
Ikwu oke: 4.9. Onu ogugu nke otu: 610
Video nke nyocha na njikwa nke ndị ọrụ
Dezie ndekọ na njikwa nke ndị ọrụ
A ga-arụ njikwa njikwa ndị ọrụ rụọ ọrụ nke ọma na nke ọma na mmemme USU Software usoro nke ndị ọkachamara anyị na-eduga. Dabere na njikwa na njikwa, ọ dị mkpa iji ọtụtụ arụmọrụ dị na nchekwa data USU Software, mepụta akwụkwọ akpaka nke akwụkwọ nke usoro na ọdịnaya ọ bụla. N'ihe banyere njikwa ndị ọrụ na njikwa, enyere gị aka nke ukwuu ịmebata ohere ndị ọzọ na usoro nlekota na mmemme sistemụ USU. Ndị ọrụ dị ugbu a na-anọchi ndị ọrụ ha nke ọma mgbe ha nyefechara ụdị ọrụ na-eduzi ihe metụtara ọnọdụ nsogbu na mba na ụwa. Ọnọdụ dị ugbu a kwaturu ọkwa niile nke azụmaahịa, na-ahapụ ohere ọ bụla dịka ụfọdụ ụdị azụmaahịa pere mpe na nke ọkara ga-adị ndụ. Ọnọdụ nke ọrịa ahụ abụrụla ihe dị oke mkpa n'ihe gbasara ọdịda akụ na ụba nke ụlọ ọrụ ndị na-enweghị ike ịkwadebe ego idobere ikike iji lanarị oge siri ike dịka onye ọ bụla. Companieslọ ọrụ ndị nwetara nke kachasị bụ ndị bịara ọhụụ bụ ndị bidoro mmepe ha ma enweghị ego na-achịkwa ha ma ọ bụrụ na ihe mberede na mba na ụwa. A tụlere isiokwu ndọrọ ndọrọ ọchịchị nke ịkwado ndị ọchụnta ego, bụ ndị mkpa ha dara na ọkwa mkpa ọha mmadụ belatara nke ọma, tụlere ụwa niile, na-abụghị isi mkpa na ngalaba ọrụ. Na nke a, imesi ike ịchọta ụzọ ọpụpụ dara na mbenata ụgwọ ga-pere mpe yana ụlọ ọrụ na-agbanwe usoro ọrụ dịpụrụ adịpụ. Nye ọtụtụ ụlọ ọrụ, usoro ihe omume a bụ nzọpụta n'ezie, ebe ọ gbanwere iji dozie uru, belata mgbazinye na ụgwọ ọrụ, yana ịchekwaa ndị ọrụ ibe dịka ịchebe mkpa dịka mmepụta nke akụrụngwa. Ntughari gaa na ọrụ dịpụrụ adịpụ adịghị mfe dị ka ọ dị, ebe ọ bụ na ọtụtụ ndị ọrụ, agbanyela na ọnọdụ dịpụrụ adịpụ, bidoro ịla azụ ileghara ibu ọrụ ha anya, na-agbadata ọkwa nke nzukọ ahụ. Ndị isi nke ụlọ ọrụ enweghị ike ileghara nnukwu ihe omume a anya wee malite ịtụgharị na ụlọ ọrụ anyị iji nyere aka na arịrịọ maka ịmalite ọrụ ndị ọzọ ga-enyere aka ịhazi ihe. Ndị ọrụ nke ụlọ ọrụ anyị lebara ndị ahịa niile bịakwutere anya ma geekwa ntị n'ọtụtụ ọchịchọ, ekele nke anyị nwere ike ikwu ma mepụta ọrụ ọzọ nke usoro USU Software system maka nlekota na nlekota ndị ọrụ. Ọ tụgharịrị iji chịkọta ndepụta ụfọdụ nke atụmatụ ndị ghọrọ akụkụ bụ isi nke usoro nlekota ahụ, ọ dịkwa mkpa ịtụle ụlọ ọrụ nwere ụdị ọrụ na-abụghị nke chọrọ usoro pụrụ iche na nhọrọ zuru oke nke arụmọrụ. Tupu ịmalite njikwa ọrụ na njikwa, ọ dị mkpa iji gwa ndị ọrụ na a ga-enyocha ha site na ịhazi ịdọ aka ná ntị na ịdebe ụbọchị ọrụ. Isi ihe ngwanrọ nke USU, nwere ikike ndị ọzọ agbakwunyere, na-enwe ike ijisi ike na-achịkwa idebe ihe a na-eme kwa ụbọchị yana atụmanya nke ịme awa ole achọrọ na usoro ọrụ. Ndị ọchụnta ego nwere ike ịlele ihu igwe nke onye ọrụ ọ bụla wee hụ onye na ihe ọ na-eme ụbọchị ọrụ na mmemme sistemụ USU. A na-arụ ọrụ na njikwa ndị ọrụ na-ewepụta oge nke ozi natara n'ime ebe nchekwa ahọpụtara nke ọma site na njikwa nzukọ. Nwere ike ịrụ ọrụ nke ọma ma rụọ ọrụ nke ọma na njikwa ihe nchekwa data USU Software ma e jiri ya tụnyere ọrụ ụfọdụ ndị mere site na ibe ha. Ya mere, ọ ga-ekwe omume, site nkọwa ụcha, gbakọọ onye ji akọ na uche rụọ ọrụ ha, yana onye ghọrọla onye ọrụ ezumike, na-etinye oge ọrụ na ihe ndị metụtara ya. Ihe osise na-egosi ugboro ole akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, nke na-egosi ọrụ ndị ọrụ gị. Ọnụnọ nke edo edo na-egosi ntụsara ahụ na nwayọ nwayọ nke usoro ọrụ yana usoro ọrụ dị iche iche. Banyere ihe na-acha ọbara ọbara, anyị nwere ike iji obi ike kwuo na e ji vidio nke aka anyị, egwuregwu dị iche iche, na ihe omume ndị ọzọ na-adịghị anakwere dị ka ikiri. Naanị agba ị kwesịrị ị paya ntị bụ ụcha na-acha odo odo, ọnụnọ ya na eserese na-egosi oge nri ehihie. Mgbe ị tụlechara usoro a kwa ụbọchị, ị nwere ike ịghọta otu iche iche ndị ọrụ niile si arụ ọrụ nke ọrụ ọrụ ha. Na njikọ a, ị ga - enwe ezigbo ihe kpatara ị ga - eji ghọta ihe na - eme, na - eme ka gị na ndị ọrụ nwee mkparịta ụka ruo na ịchụpụ ndị mmadụ natara ego na-erughị eru, na-agbadata ọnọdụ akụ na ụba nke nzukọ a. Yabụ, ị ga - enwe ike idozi njikwa na ịhazi nzukọ ahụ site na iji ikike ọgbara ọhụrụ nke sistemụ USU Software, nke ga - abụ onye gị na onye inyeaka na ogologo oge. Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla gbasara ndị ọrụ njikwa na njikwa, ị nwere ike ịkpọtụrụ ndị ọkachamara anyị na-eduga maka enyemaka, ndị nwere ike idozi nsogbu ọ bụla nke ekwentị welitere. Iji usoro dị iche iche nke ndị ọrụ nyocha na njikwa, ị nwere ike iwulite otu nke gị, gụnyere ndị ọrụ ruru eru na ndị nwere ọrụ. Nyefe ego ọ bụla ga-adị n'okpuru akaụntụ na njikwa nke ndị isi ụlọ ọrụ ahụ, ndị nwere ike ịlele nkwupụta na akwụkwọ ego, na-edozi nguzozi kwa ụbọchị na mbido ụbọchị. Nwere ike ịnye njikwa nke ụlọ ọrụ ụdị akwụkwọ ọ bụla, na nzipu ozi site na e-mail. Usoro nchekwa data USU-Soft natara ozi anatara ma mepụta data na-enyefe ụtụ isi na akụkọ ndekọ ọnụ ọgụgụ site na nkeji na nbudata na weebụsaịtị nke ụlọ ọrụ ndị omebe iwu. Ihe ndekọ nke ndị ọrụ na njikwa njikwa na-enyere ọtụtụ ụlọ ọrụ aka ịlanarị oge siri ike n'ụzọ ọ bụla, nke chọrọ usoro iwu na nkwado ego mgbe niile. Ndị mmepe nke usoro ihe omume USU Software na-eme ka ohere dị na njikwa na nlekota ndị ọrụ na usoro ọ bụla na ụlọ ọrụ ọ bụla na-arịọ maka enyemaka. Ihe dị iche iche nke freeware dị na nhazi ya dị mfe, nke a ga-ekwe nghọta n'ihe gbasara arụmọrụ na-enweghị enyemaka nke ndị ọkachamara, na USU Software base kedụ iche na ikike ya nwere ọtụtụ ọrụ na-arụ ọrụ dị mgbagwoju anya na ọrụ. Enwere ọnọdụ na mmemme USU Software, enwere ike idozi ya ma ọ bụrụ na ịchọrọ ngwa ngwa site na ịtinye igbe nlele iji gbanye ma gbanyụọ nhọrọ dị iche iche na nghọta gị. Ọtụtụ ụlọ ọrụ, n'agbanyeghị ọkwa azụmaahịa ha, chọrọ ịtọ ntọala IMS site na njikwa na njikwa ọzọ maka usoro akwụkwọ na-aga nke ọma. Na ngbanwe na ọrụ dịpụrụ adịpụ, ntọala niile nke ọrụ otu gị dịgasị na mmemme sistemụ USU, nke na-enyere ndị ọrụ aka ịmekọrịta. Site na nzụta sistemụ sọftụwia USU maka ụlọ ọrụ gị, ị nwere ike idobe ihe ndekọ nke ndị ọrụ ma jikwaa ogo ọrụ arụ ọrụ na usoro ị na-eme kwa ụbọchị.
N'ime mmemme ahụ, ị nwere ike ịmepụta ntọala nke onwe gị yana nkọwa ụlọ akụ maka ụlọ ọrụ iwu. Maka ndị ji ụgwọ n'ụdị ndị ji ụgwọ na ndị ji ụgwọ, ị na-amalite ịmalite akwụkwọ iji gosi ego ole ụgwọ. Agreements nke dị iche iche formats na nzube na-enwe ike a kpụrụ na freeware na ndọtị nke okwu ojiji dị ka mkpa. Ego na-ejighị ego na ego ejiri nọrọ n'okpuru njikwa njikwa nke njikwa.
N'ime mmemme ahụ, ị na-edekọ ihe ndekọ nke ndị ọrụ iji chịkwaa na ịdebanye mmejupụta nkọwapụta ọrụ ha. Enwere usoro ngwakọ nke na-enyere aka ịchọpụta aha ọnọdụ nke ngwa ahịa site na oke na ụlọ nkwakọba ihe na ogige ahụ. Iji usoro mbubata, ị nwere ike ịmalite ịmalite ịmepụta akwụkwọ na nchekwa data ọhụrụ mgbe ị nyefechara ihe ndị fọdụrụ. Tupu ịmalite ịmepụta akwụkwọ na nchekwa data, ịkwesịrị ịnweta ohere onwe gị n'ụdị nbanye na paswọọdụ maka ndị ọrụ dị ugbu a. N'inwe nhazi dị mfe ma ghọta, ị nwere ike ịmụ ọrụ ahụ n'onwe gị na enweghị enyemaka nke ndị ọkachamara. Ndị ọrụ nwere ike ịmepụta ọrụ dị mkpa n'ụdị akụkọ banyere uru nke ndị ahịa oge niile.
A ikpe ngosi version nke nchekwa data mmemmem a ngwa ngwa ọmụmụ nke arụmọrụ tupu ịzụta isi freeware. Ngwa mkpanaka mepụtara n'oge ọ bụla na-enyere aka ịdebe ndekọ nke ndị ọrụ na njikwa na nrube isi nke ọrụ ha.
Ozi nke ụdị dị iche iche na-agwa ndị ahịa n'ụzọ zuru ezu gbasara njikwa ndị ọrụ dịka njikwa.
Onwere ihe akpaghị aka, site na enyemaka nke enwere ike, n'aha ụlọ ọrụ iji gwa ndị ahịa maka njikwa na njikwa.
Ọdụ ndị pụrụ iche na-enwe ike ịnabata nnyefe ego dị iche iche dị na ọnọdụ dị mma n'etiti obodo ahụ. E mepụtara atụmatụ nke isi n'ụdị ọgbara ọhụrụ a nke na ọ na - enyere aka ịdọta ọnụ ọgụgụ buru ibu nke ndị chọrọ ịzụta freeware. Increasebawanye ọsọ nke ide ihe na-enyere aka itinye cursor na njin ọchụchọ site na itinye aha ọnọdụ ahụ. You nwere ike ịlele nyocha nke onye ọrụ ọ bụla na njirimara nke omume ya na ibu ọrụ ya. N'iji tụnyere arụmọrụ agụmakwụkwọ na ọkwa arụmọrụ n'etiti ndị ọrụ ga-ekwe ka ọrụ pụrụ iche na nchekwa data. Enwere ike ịmepụta atụmatụ dị iche iche nke eserese, eserese, na tebụl maka ndị ọrụ iji chọpụta ogo ịrụ ọrụ.
Enwere ọrụ pụrụ iche nke ịpụta ọdịdị, nke ga-enyere gị aka ịmata mbido nke onye ọbịa ahụ n'ọnụ ụzọ ụlọ ahụ.
N'ime usoro ị na-arụ ọrụ, ị ga - ebugo ozi anatara na diski enwere ike iwepụ ma ọ bụ ihe mberede. Ihe omume a na enyere gi aka ighota ajuju obula gbasara achikota ndi mmadu na ichikota, inwe ikike nlekota nke oge a. Maka ndị na-akwụ ụgwọ, ndị ọrụ nwere ike ịme ngụkọta pụrụ iche site na ị na-enweta mgbakwunye ndị ọzọ dịka nkwupụta ahụ si dị. Ndị nduzi na-enweta ozi sitere na ndị ahịa na nzaghachi na arụmọrụ ndị ọrụ na ogo ọrụ ndị ahịa.